Ntuziaka Mwakpo Malware nke Malware
Ndị na-ahụ maka ihe nkiri na ndị na-ebuso ndị agha agha na-akụda B2B na ụlọ ọrụ B2C na ọnụego 10% kwa afọ. Dị ka Pros, ndị na-agba ọsọ ejiwo usoro ha na-agbasa n'ime ndị ọrụ weebụ na ntanetị ndị mmadụ na ọkwa dị elu karịa ebe ha na-eji ugbu a na-etinye ego na spam email iji wepụ ndị ọrụ kọmputa.
Ryan Johnson, Onye isi ahịa ahịa nke Semalt , na-enye nghọta n'ụzọ dị nchedo iji kpuchido usoro gị site na mwakpo - rent a computer to own.
Iji nọrọ na nche mgbe ị na-eji ịntanetị na mgbe ị na-ebudata faịlụ site na ndekọ aha na-adịghị mkpa. Eruola ọtụtụ ụlọ ọrụ na òtù dị iche iche n'ihi ọrụ nbudata ihe oyiyi na ngwanrọ sitere na ebe nrụọrụ weebụ obi ọjọọ. N'izu ole na ole gara aga, ndị na-agba ọsọ na-eme atụmatụ ịhazi ọrụ ntanetị ndị ọrụ mgbasaozi site n'izite ha ozi-e na-ele dị ka legit ozi ịntanetị. N'ikpeazụ, ndị agha ahụ jisiri ike weghachite ozi onwe onye na nke ego site na ndị ọrụ site na redirecting ha na ebe nrụọrụ weebụ ọjọọ.
Ịdebe ngwanrọ gị na ihe nchedo emelitere mgbe ị na-eji ịntanetị bụ otu n'ime ihe ndị na-egbochi ịnwa ndị ọkachamara na ndị na-awakpo ihe iji gbasapụ. Tụlee ileghara ozi ịntanetị na ozi ntanetị zitere site na saịtị amaghị. Na-enyocha legitimacy nke mkpokọta weebụ mgbe niile ka a kwadoro maka ịchekwa akaụntụ gị.
Olee otú ndị scammers si achịkwa iji weghachite data sitere na PC gị?
Ndị ọkachamara na-eji ndị ọrụ amaghị ama nweta ohere zuru ezu na akaụntụ ha. Ihe eji eme ihe site n'aka ndị scammers iji gbasaa PC gị gụnyere:
Ntugharị bụ otu n'ime usoro kachasị eji eme ihe iji chekwaa ndị ọrụ. ebe ọ na-ejikwa akụkọ ihe nchọgharị gị na ihe aga-eme ọ bụla ọzọ. Mgbe ịnweta ohere gbasara ego na nkeonwe gị, ndị na-agba ọsọ na-eji ozi ahụ na-ezu ohi na usoro aghụghọ.
njikọ dabeere na vidiyo
Ọtụtụ nchịkọta mgbasa ozi ọha na eze nọ na-eme mkpesa nke ịbụ ndị a kwadoro mgbe ịpịrị njikọ nke ndị enyi ha zitere. Ndị na-agba ọsọ na-eji vidiyo iji kpọghachite malware na Trojan virus nke emechara tinye na kọmputa gị mgbe ịpịsịrị njikọ ahụ.
Otu esi egbochi nje malware na PC gị
Antivirus bụ ngwá ọrụ dị mkpa mgbe ọ na-abịa na nchedo weebụ. Antivirus achọpụta saịtị na njikọ ndị nwere ike imerụ PC gị mgbe ịpịrị ha. Iji zere ịdaba site na Trojan nje na egwu egwu, wụnye ma debe mgbochi gị ruo n'oge.
Ojiji nke ederede ihe eji eme ihe
Akaụntụ kọmputa tinyere nhọrọ nchịkwa dị mfe ịnweta ha site na scammer. Mgbe ị na-edozi software na akaụntụ gị, jiri usoro omenala nke nchekwa rụọ ọrụ mgbe niile.
Adịghị etinye usoro ihe omume ị na-enwe obi abụọ banyere iwu ya
Ịlele usoro ziri ezi nke mmemme tupu ịwụnye ọ na-akwado mgbe niile. Zere itinye ma ọ bụ ịpị 'ee' na software na mmemme amaghị.
Firewall dị ezigbo mkpa mgbe ọ na-abịa na ebe nrụọrụ weebụ na nchebe weebụ. Kọmputa nwere mgbakwunye firewall na-enweghị ike igbochi ndị na-eme ka scammers gbasaa PC gị. A firewall na-adọ aka ná ntị ndị ọrụ kọmputa mgbe nje nje ma ọ bụ nje na-arụnyere na kọmputa ha. Nwee mgbasa ozi dị irè site na izere ịpị njikọ na njikọ, ọbụlagodi na njikọ yiri ka ezipụ enyi gị kachasị mma .